Umyinge weGolide weSilivere, konke malunga nelinye lawona maxabiso adumileyo | Ezezimali
IClaudi Casal | | Uqoqosho ngokubanzi
Ngaphambi kokuqala, cacisa ukuba zininzi iiratiyo. Ayisiyiyo ngenxa yokuba benikwe amagama, kuba nje umlinganiso unokutsalwa kuyo yonke into. Zonke zinxulumene nenye kwi-asethi. Umzekelo, owaziwa njengeDow Gold Ratio, kodwa namhlanje siza kuthetha nge Umlinganiso weGolide weSilivere, ityala elithile ekufuneka lijongwe ngamehlo ahlukeneyo.
Ukwenza oku, uya kubona ukuba yintoni umlinganiso kwaye ufumaneka njani, ukusukela nini ukuba sithi ukhona, ungawachonga njani amaxesha, kwaye okona kulungileyo, indlela yokutyala imali kuyo kuxhomekeke kwindlela okhoyo ngayo. Sele ulungele?
1 Uthini umlinganiselo wegolide wesilivere?
2 Ubalwa njani umlinganiselo wegolide wesilivere?
2.1 Ukuba umyinge uyenyuka, yintoni ebizayo kwaye yintoni engabizi?
3 Imbali yexabiso lesilivere yegolide
3.1 Kwiminyaka yakutshanje
Uthini umlinganiselo wegolide wesilivere?
Umgangatho weGolide weSilivere uvela kubudlelwane bezikowuteshini phakathi kweGolide neSilver. Zombini izinyithi, njengazo zonke iimarike, ziyaguquguquka kumaxabiso azo. Kwaye into enomdla kule meko kukuba igolide kunye nesilivere zihlala zineendawo ezifanayo zokurhweba. Xa enye yazo inyuka, enye inokwenzeka. Nangona kunjalo akusoloko kunjalo.
Umlinganiselo wegolide nesilivere Kusinceda ngokuchanekileyo ukufumanisa loo maxesha apho ixabiso lingasondelanga njengoko kufanelekile. Oku kwenzeka xa elinye linyuka ngexabiso xa kuthelekiswa nelinye. Singayijonga le ndlela yokuziphatha yegolide kunye nesilivere, kodwa masicinge ngomzekelo ngegolide.
Ngamanye amaxesha igolide inyuka kakhulu, kwaye isilivere incinci.
Abanye, igolide imile, ngelixa isilivere inokuhla.
Ngamanye amaxesha igolide inokunyuka ngokukhawuleza okukhulu, kwaye isilivere inokunyuka kancinci.
Kwenzeke ntoni kwezi meko zintathu? Igolide leyo ibalasele ngaphezu kwesilivere. Singathi igolide ibixabisile kwixabiso xa ithelekiswa nesilivere. Ngaba kunokuba nomtsalane emva koko, ukutyala imali kwisilivere? Ukwenza oku, makhe sibone ukuba kunomdla kangakanani, ukufunda ukubala umyinge.
Ubalwa njani umlinganiselo wegolide wesilivere?
Ukwahlula phakathi kwexabiso elidweliswe kwigolide nakwisilivere ngexesha elinikiweyo kwanele. Ukuze ungaphumeleli kakhulu, ndiza kuthatha ixabiso langoku le-ounce yegolide, eyi- $ 1.842'60, ngexabiso elikhoyo lesilivere, elingu- $ 25'32.
1.842'60 igolide / 25'32 isilivere = 72'77. Eli nani likhokelela kumyinge.
Ngamanye amagama, umlinganiso wegolide-wesilivere uyafana nokuthi -> Zingaphi ii-ounces zesilivere esinokuzithenga ngeyunithi enye yegolide? Sibonile ukuba namhlanje, singathenga ii-ounces ezingama-72 zesilivere ngegolide enye.
Ukuba umyinge uyenyuka, yintoni ebizayo kwaye yintoni engabizi?
Kwaye oku ndiyakuthetha, kuya kufuneka uyibone ngamehlo ahlukeneyo. Ndiqaphele abantu ukuba bayabhideka yilento. Umyinge uwodwa awusixeleli ixabiso lezoqoqosho. Kuphela bubungakanani obusikhokelayo, ukwazi ukuba inomdla njani into xa ithelekiswa nenye. Sebenzisa lo mgaqo ngegolide / ngesilivere:
Ukuphakamisa umyinge: El oro Iba ngaphezulu caro (ngokubhekisele kwisilivere).
Ukuphakamisa umyinge: La ahlawule Iba ngaphezulu ngexabiso eliphantsi (ngokubhekisele kwigolide).
Enye iya ngokuchasene nomnye, nokuba iyenyuka okanye iyehla.
Ubungakanani obuphantsi: El oro Iba ngaphezulu ephantsi (ngokubhekisele kwisilivere).
Ubungakanani obuphantsi: La ahlawule Iba ngaphezulu ubuso (ngokubhekisele kwigolide).
(Kukwakhona nomlinganiso wesilivere / igolide. Nangona kunjalo, ayisetyenziswa kakhulu, ndicinga ukuba ngenxa yexabiso elivelayo lihlala lisondele ku-0 (0'01xxx) kwaye zincinci iintshukumo ezibonakalayo ngokwamanani. Nangona kucacile, kukho iigrafu )
Imbali yexabiso lesilivere yegolide
Ukusuka kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe kuye ekupheleni kwenkulungwane yeshumi elinesithoba, umlinganiselo wegolide nesilivere wawuzinzile kakhulu. Ukuhlala ujikeleze 14/1 kunye 16/1. Kwakusekupheleni kwenkulungwane ye-40 apho umlinganiso waqala ukunyuka. Ifike malunga ne-20 ekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX, ukuwela kwi-XNUMX ingqamana neMfazwe yeHlabathi yokuQala.
Olo manyano malunga ne-14 kunye ne-16 ebigcinwe iminyaka (iinkulungwane) ilahlekile, kwaye ayizinzanga kwakhona. Ngaphezulu, Ngexesha leminyaka eli-100 ezayo umyinge awunyukanga kwaye wehle nje kuphela, kodwa ungqamene neentlekele ezinkulu kwaye abahlalutyi abaninzi bayithatha njengesalathi esikhulu.
Ngexesha i Imfazwe yesibini yeHlabathi, umlinganiso wawukho kwi-100.
Emva kwexesha, ukuya ngasekupheleni kweminyaka engama-60, hit hit lows kancinci ngaphezulu kwama-20 (ayisabuyiswa).
Año Ngo-1991, iMfazwe yaseGulf, umlinganiselo wafikelela kuma-90 malunga.
Inamaconsi ukusukela ngoko, kunye neencopho eziphakamileyo, kodwa omnye umzuzu wokuqaqambisa, Ingxaki eyavela ngo-2008 ngokuwa kwabazalwana bakaLehman. Phantse kwafikelelwa kuma-90, ukuya kuhla malunga nama-30.
Kule grafu ungabona ngokucacileyo ukungxama okubandezelekileyo kule minyaka idlulileyo.
Siyabona, njengakwi-2008, yafikelela kwincopho ephezulu, ukuhla ngamandla. Ubukhulu becala, ngenxa yohlaziyo olomeleleyo lwesilivere, eyafikelela kwiidola ezingama-50 ngeewunce. Nangona kunjalo, ngenxa yothuka ngesiquphe kwimarike yemasheya kwi-2020, irekhodi lembali labekwa. Utyalo-mali kwisilivere lwalungeniso ngakumbi. Kwakungabizi kakhulu xa kuthelekiswa negolide.
Ukuba besithengise ii-ounces zegolide ezi-2 ngokutshintsha ii-ounces ezili-160 zesilivere, besinokutshintsha ii-ounces zesilivere ezili-160 ngo-2011, malunga nee-ounces ezintlanu zegolide. Liphi ishishini? Ukuba lowo wayengathengisanga ii-ounces ezimbini zegolide ngo-2, ngo-2008 usenokubanakho u-2011 endaweni yesi-2. Elahlekelwe lithuba lokuphindaphinda ngo-5 ​​ii-ounces zakhe zegolide kwiminyaka emi-2. Into enomdla malunga nalo mlinganiso kukuba ephezulu okanye esezantsi, ukuthengwa kwamathuba amakhulu okanye ukuthengisa kunokufumaneka.
Lo mzobo ndiwususile Ixabiso leGolide, unokufikelela ngokuthe ngqo. Into endiyithandayo ngale webhusayithi kukuba banikezela umlinganiso onomdla ngakumbi ngaphandle kwale.
Sisigqibo somntu wonke sokuguqula izinyithi ezixabisekileyo zibe yimali, okanye izinyithi ezixabisekileyo zezinye izinyithi ezixabisekileyo. Kum, kwaye ndithetha oku buqu, andikuthandi ukudibanisa "izinto zohlobo olwahlukileyo." Ndikubona kufanelekile ukusebenzisa amathuba athile, kuxhomekeke apho kubonakala ngathi umoya uzakujika khona. Ngamaxesha onke, sithatha umngcipheko wobani, ukuba sinokuba siphosakele.
Kodwa oko kudlulile, kwaye asinayo ibhola yekristale yokuqikelela ikamva. Nangona kunjalo, xa unikwe umzuzu wangoku, ucinga ntoni? Ixesha liya kuzisa impendulo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ukulinganiswa kweGolide yeSilivere